Talooyin ku saabsan waxa laga sameeyo Barcelona - 1aviagem.com
Talooyin ku saabsan waxa laga sameeyo Barcelona
Qormadii hore: Waa abaalmarin loogu talagalay Notre-Dame
Boostada xigta: Qarniga toddobaad
Dhejiyay 30 July 2019 by Rômulo Lucena
Barcelona aad ayey ugu fiican tahay kuwa jecel dhismayaasha aan caadiga ahayn.
Wejiga iyo gudaha aragtida hoos ku taxan ayaa runtii keenaysa khibrad u gaar ah oo bannaanka ka ah booqde kasta.
Haddii tani ay tahay safarkaaga ugu horreeya ee Barcelona raac talooyinkaan:
Waxa ugu horreeya ee aad ogaan doontid waa in magaalada Barcelona aysan ku hadlin Spanish, Catalan waa afkooda rasmiga ah.
Nasiib wanaag kuwa yaqaana afka Boortaqiiska, maxaa yeelay calaamadaha iyo dariiqyadu aad ayey ula mid yihiin Bortaqiiska oo hadaad ogtahay inaad Bortaqiiska waxoogaa fududahay inaad fahamto, xitaa way ka sahlan tahay luuqadda Faransiiska.
Sidoo kale haddii aad taqaanid Isbaanish waxaad sidoo kale xoogaa fudud kuu la qabsan doontaa Catalan. Ka dib luqadda oo dhan waxay u muuqataa inay tahay nooc nooc oo kala duwan oo ah Castilian.
2- El Prat Airport
Haddii aad ku timid diyaarad ka socota garoonka diyaaradaha ee El Prat bal eeg garoonkii aad ka soo degtay, waxaa jira Terminalyo 2 ah, iyo bas cagaaran oo isku xiraya labada bilaash, wuxuu qiyaastii yahay 15 daqiiqo min hal terminal kan kale. Meesha baska lagu qaadayo way kala duwan tahay iyadoo ku xidhan jihada. Mid ayaa dhulka hoostiisa gala, halka mid kalena hoos udhacayo, waa wax xiiso leh inaad hubiso macluumaadka ilaaliyaha amniga haddii aad shaki ka qabtid meesha aad joogto. Baska ka tagaya marinka dhulka hoostiisa wuxuu sidoo kale tagayaa magaalada waana suurtagal inaad ku timaado oo aad u tagto ficil toos ah, taas oo ah, bartamaha magaalada, waxaad ka iibsan kartaa tikitka baska kaasoo kuu geyn doona bartamaha magaalada lafteeda. Madaarka Oo si toos ah ugu aado isha Magic iyadoo ku xidhan waqtiga, waa mid aad u qiimo badan.
3- Isha Biyaha Magic
Fountain Magic wuxuu ku yaal Montjuïc, hadaad timaado fiidkii Madaarka Barcelona waxay leedahay bas kaas oo adiga ku heli doona Waxay kaa qaadaysaa inaad dhaaftay, waxay mudan tahay in la istaago in la arko showga iftiinka iyo muusikada goobta. Waxay yihiin wax cajiib ah jawiguna waa mid cajiib ah. Tilmaantu waa inay goor hore timaado oo ay hesho meel wanaagsan oo lagu joogo. InfeSida xarun kasta oo dalxiis ah, waa inaan taxaddar muujino maxaa yeelay waxaa jira jeebado yar yar oo ay sababtu tahay buuqa iyo soo jiidashada meesha ayaa ku dambaysa ficil fudud. Marka, haddii aad samaynayso sidii aannu ku samaynnay shandaddii oo toos uga soo degaysa baska diyaaradahaKa taxadar alaabadaada. Xulo meel u dhow darbiga horeba u caawiya xagga nabadgelyada iyo fuulitaanka si aad u aragto ilaha dhaansiga. Gaaritaanka ilaha waa lacag la'aan waxayna shaqeeyaan laga bilaabo Khamiista ilaa Axadda saacadda 20: 00h (8: 00 pm).
4- Lookout oo u dhaw Plaça Catalunya.
Iyadoo la tixgelinayo inaad doonayso inaad ku aragto bandhigga biyaha qoob-ka-ciyaarka oo horeba Plaza de Catalunya waxay leedahay muuqaal leh aragtida ugu xiisaha badan ee magaalada oo ay mudan tahay in la hubiyo, xitaa waxaad yeelan kartaa muuqaalka panoramic ee taallo kala duwan, baarkinno, goobo, iyo qalcadaha halkaas.
Waxay leedahay wiish la dallaciyey oo kor loo qaaday, tan waxay gacan ka geysaneysaa yareynta tirada dadka halkaa ku sugan. Waxaa laga yaabaa inaad ka aragto isha sare ee qoob-ka-ciyaarka korka. Nasiib darrose waxaan baaris ku helnay mar dambe oo halkaas ayaan u aadnay keliya maalintii aan tagnay, laakiin arag sida ay mudnaanta u leedahay aragtida.
5- Macbudka Gaarka ah ee Quduuska ah
Ama kaniisadda Sagrada Familia, oo ku xigta Gaudí Square oo ay fududahay in la helo dhererkeeda.
Qaab dhismeedkeeda waxay heshay saameyn badan oo ay ka mid yihiin kan Antoni Gaudí. Ku biiritaanka qaabkii Gotik ee casriga, oo leh taabashadiisa shaqsi ahaaneed tusaale ahaan saddex qaybood ayaa lagu dabaqay abuuritaanka isla goobtii, iyadoo la tixgelinayo in Gaudí uu lahaa qaabkiisa u gaarka ah uuna doonayey inuu ka shaqeeyo agabyada dhismayaasha. Sababtaas awgeed Sagrada Familia waa kaniisad u qalma in la mahad celiyo, laga bilaabo dibadda. Runtii waa wax cajiib ah inta faahfaahin ee ay leedahay.
Oo waxaad arki kartaa inay leedahay munaarado sheegaya injiilka 4 rasuullada (Matayos, Markos, Luukos, Yooxanaa) iyo mid kale oo loogu talagalay Maryan oo bikro ah iyo midda ugu dambaysa uguna weyn uguna sheekaynta nolosha Masiixa. Taasina waa sababta oo ah waxaan ka hadlaynaa kaliya wajiga.
Sababo dhaqaale awgood Gaudí wuu dhammaystiri kari waayey, laakiin wuxuu u adeegsaday tijaabo ahaan iskuxirka alaabtiisa ee shaqooyinka kale. U qalanta booqashada.
6- Gothic Cathedral ee Barcelona
Iyadoo weli laga hadlayo kaniisadaha, waxaa jira cathedral-ka Gothic ee Barcelona halkaas oo aad ku arki karto qabuuro kaladuwan oo ay ku jiraan xabaasha Santa Eulalia. Waa wax lagu qoslo sida waayihii hore dadku ay macno ahaan loogu aasay gudaha makhaayadaha. Tani waxay ka dhigaysaa Cathedral inay leedahay shaqo laba-geesood ah, labadaba kaniisad iyo xabaalo. Waxaa laga yaabaa inay ahayd hab lagu hago nafaha lumay, hubaal anigu garan maayo. Hadaad ogtahay inaad kaga tagto faallooyinka waxa aad ka aaminsan tahay.
7- Quoter Gothic,
Xaafaddu waxay u dhowdahay inay waddo bulsheed ah oo waddooyinka dhexe leh soo jiidasho badan, kafateeriyaal iyo baararka.
Jid ahaan, waa wax xiiso leh in la barbardhigo isbarbardhiga Gotikka iyo xariiqyadiisa toosan ee Gaudí, oo leh qaabab wareegaya oo midab leh.
Hagaag halkan waxaan magacaabi doonaa dhowr laakiin waxaan soo jeedinayaa inaad dooratid kaliya kuwa, sababtu waxay tahay inaad ku farxi doonto marka hore, ku celi qeybta labaad ka dibna daalku wuxuu bilaabi karaa garaacis wax yar inuu booqdo.
8- Muuqaalka Montjuic
Midda ugu horeysa iyo waajibku waa aragtida guud ee Montjuic. Waxay leedahay wiish, oo aad ugu dhow isha sixirka. Aniga ahaan waxay ii aheyd aragtida ugu xiisaha badan ee Barcelona
9- Aragtida ka socota Parc Güell
Wax yar oo dhib badan si loo tago halkaas, waxay leedahay fuulitaan weyn iyo wiish-weyne, laakiin aragtida ayaa sidoo kale magdhabaysa daalkii socodka.
10- aragtida Doomaha Aeri del Port
Waa gaari xamuul ah oo maraya dekada magaalada Barcelona sidoo kale waa mudan tahay booqashada. Gaar ahaan haddii aad u dhowdahay dekedda
Doonta markabka laga keenay ee Puerto.
Casa Batló aad ayuu uga duwan yahay wixii aad waligaa aragtay, naqshaddiisuna sidoo kale waxay leedahay saameynta Gaudí. Markii aan tagnay waxaa loo xiray dayactir si aan kaliya u aragno wajiga dhismaha.
Haddii aad tahay taageere kubada cagta ah oo aad jeceshahay ciyaartoydii maanta ugu sareysa markaas waa inaad aadaa Camp Nou, oo sida fiican loo yaqaan Garoomada Barcelona.
Halkaa waxaad kula socon kartaa taariikhda kooxda oo aad arki kartaa in ay haysteen (oo ay wali haystaan ​​qaar) xiddigo kooxda, xiddig dhab ah oo ka kooban xiddigaha sida Ronaldinho Gaúcho, Leonel Messi iyo Daniel Alves, Suáres, Neymar Júnior, iwm. (Hagaag, kan dambe waa xiddig toogasho ah) laakiin weli wuxuu leeyahay kubaddiisa markii uu doonayo inuu ciyaaro.
U qalmida booqashada, sawirka muuqaalka, laakiin qiimaha dukaanku waa xoogaa cusbo ah, soo jeedinta ayaa ah inaad ogaato, ma aha inaad iibsato.
11- Kaarka Ardayda
Haddii aad arday tahay oo boorsada jeebka ku qaadatid, safarkaaga u kaxayso, waxaa laga dhimayaa gelitaanka matxafyada iyo jardiinooyinka badankood.
12- Keydso Biyo
Biyo cabitaanka ayaa muhiim u ah safar kasta. Tilmaamaha loogu talagalay in lagu badbaadiyo lacagta Barcelona waa in la isticmaalo ilaha magaalada, haa, waxaa jira ilo ku habboon oo la cabbo, mararka qaarkoodna wax yar baa qarsoon, laakiin way jiraan. Way awoodaan in kasta oo dhadhanka kaladuwan. Iyagu isku lamid yihiin ilaha biyaha, waa ilo biyoodyo yar yar oo la cabo oo u dhaw goobaha dalxiiska. Markaa qaado dhaladaada oo dib ugu kuleyso isha biyaha, tan waxay kuu badbaadin doontaa dhowr Euro oo kaa haraadin doonta hargahaaga inta aad soconeyso.
Hadda waad sameyn kartaa socdaal aad ku booqato: "La ciudad Condal" (Magaalada Tirooyinka) Ayadoo ay ugu wacan tahay kaqaybgalka Tirooyinka xorriyadda qarniyadii saddex iyo tobnaad iyo afar iyo tobnaad. Barcelona waxay ahayd caasimadii Boqortooyada Catalonia iyo Aragon (Renato Aragon ayaa leh jaakad hub ah?!) Laakiin maanta waxay ku noqotay boqortooyada Spain. Waxaana jira dhaqdhaqaaq cusub oo ka dhigaya gobolka Catalonia mar labaad madaxbanaani. Ma tahay haddii ay awoodaan?
Xaraashyadu sidoo kale waa kuwo aad u qurux badan, laakiin weli waxay muujinayaan kooxdooda Isbaanishka.
13- Helitaanka Gaadhiga:
Waxay kuxirantahay halka aad timid iyo waxa aad u socoto safarkaaga soo socda waxaan kahelay boggan si wanaagsan u abaabulan oo leh xulasho gaadiid oo dhowr ah oo ay kujiraan maraakiibta ka tageya Barcelona.
Waxaan uga tagaa halkaan isku xiraha bookaway halkaasoo ay aad u fududahay uguna sahlan tahay in jadwalka safarka onlayn looga tago ama lagu tago meela kala duwan. Waxa ay diiradda saarayaan waa Aasiya, laakiin sida Barcelona ay u leedahay waxaad si lama filaan ah ugu heli kartaa qiimo fiican adoo adeegsanaya isku xirka:
Ogsoonow, waxaad bedeli kartaa luqadda adiga oo gujinaya calanka.
Waxaan halkaan joogaa, hambalyo weyn iyo ilaa Xilliga dambe.
Hadaad jeceshahay inaad na raacdo, emayl uun badhanka casaanka ah ee shaashada ku yaal.
Sidee Barcelona Batllo Camp Nou Catalonia El prat isha isha Gothic Parc Guell Quduuska reerka
Rômulo Lucena	Eeg Dhammaan →
U dhaqaaqidda siinta riixitaankaas yar qof kasta oo raba inuu #travel ka gudbo # COVID-19. #borala gali 1aviagem.com (isku xirka bio) #urhur 🇺🇾 #montevideo #pontosturisticos #rambla #mujica #1aviagem #bolivar #artigas
#kitty #domingou #caixadepapelao Waxa ugu fiican ee ku saabsan fududeynta ayaa ah inay aad ugu farxaan. Sanduuqa #box wuxuu noqon karaa meel dhuumasho oo weyn. Waa sida toy cusub. Sanduuqa #Cat + kartoonku wuxuu la mid yahay #success. La farxa kuwa yar oo aad wax badan kula farxi kartaan. #kittens #playing #around #enjoyyourweekend #sunday
Waxaan booqday wadamada 34 ee Qaramada Midoobay (17.61%) guud ahaan 193.